Ukuphepha kwe-Boot Linux | Kusuka kuLinux
Ukuphepha Boot Linux
i-ratakill | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani nonke, ngithanda ukuthinta isihloko sama-PC amasha nama-Laptops azayo emakethe, onke ane-Windows 8 efakwe ngaphambili futhi ene-Security Boot.
Lokhu kwenza kube nzima kithina ukuthi sibe nenye i-Operating System (i-GNU / Linux ngokwesibonelo) efakwe kwi-PC noma kwi-Laptop, kepha ungakhathazeki ukuthi sesivele sinesixazululo (angazi noma siyisona esingcono kunazo zonke noma esifanele kakhulu kepha kuze kube manje ukuphela kwayo okukhona).
Kumele wenze lokhu okulandelayo ngokuzibeka wena engcupheni. Asinacala lokulahleka kwedatha noma ukulimala kwe-HDD yakho
Kulula, kufanele nje ufake i-BIOS bese ukhubaza i-Fast Boot bese uqalisa imemori ye-USB noma i-CD kumodi ye-UEFI nokuxazululwa kwenkinga.
Ngemuva kokufaka olunye uhlelo (i-GNU / Linux), uma kunezinkinga zokufinyelela i-OS yethu, kuzofanela sisebenzise Ukulungisa i-Boot.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukuphepha Boot Linux
Ake sibone, ngabe i-shim ayisebenzi ngisho?, Yilokho okulethwa Ubuntu noFedora, uma ngingaphosisi.
Ngabe ungachaza kancane nge-Secure Boot futhi yiziphi izinzuzo zokuyisebenzisa noma ukuyenza ingasebenzi?
Izinzuzo: Ungafaka noma iyiphi enye i-OS engaveli kwimvelo ye-Microsoft noma emhlabeni.
Nebubi: Njengoba umbhali asho kokuthunyelwe okuyinhloko, ubeka engcupheni yokungahleleki okuthile ku-HDD yakho ye-PC noma iLaptop yakho.
Akufanelekile ukubheka iPc noma iLaptop engenalo uhlelo lokusebenza? Ngakho "virgin" Ngathenga i-laptop yami. Ngibeka engikufunayo ...
Iphuzu ukuthi, akulula ngaso sonke isikhathi ukuthola ilaptop "yezintombi", okungenani hhayi lapha e-US. Ngokwalokho ukonga kakhulu futhi okungenzeka kungaba ukwakhiwa kwedeskithophu yangokwezifiso
Ungachaza ukuthi iyini le-Secure Boot kanye nobuhle bokuthi iyenziwe isebenze noma yenziwe ingasebenzi?
Ungayithathi ngendlela engafanele kodwa ngibona i-athikili yakho imfushane kakhulu.
Ngikisela ukuthi useshe eSan Google, nawe unalesi sixhumanisi: http://www.uefi.org/
Kuyiqiniso ukuthi umfelandawonye weWintel usenamandla kakhulu, ngilinganisela ukuthi ama-90% -95% ama-PC angena emakethe anama-Windows afakwe kuqala, kepha ngiphinde ngabona ukuthambekela okuphezulu kwabakhiqizi abakhetha ukunikeza inketho yesibili . Uma i-ELAV neKzkg zingivumela, lapha ngikhuluma ngesihloko:
Futhi ama-Chromebook awazange akhulunywe ngawo, okuthi esimweni sePixel avumela ukufakwa okulula kwe-Ubuntu, iMint, njll.
Icala lama-Chromebook likhethekile ngoba basebenzisa iCoreboot, i-Free BIOS
Ngokwalokho engikubonile ebhodini lami le-ga h61ma d3v, i-uefi, i-boot evikelekile noma imodi ye-bios, womathathu ayakhethwa, futhi ungakhathazeki, akukho datha elahlekile ngokucisha i-boot esheshayo.
Ungafaka i-Debian nge-Safe Secure ngebhukwana elilandelayo: https://blog.desdelinux.net/firmware-la-pesadilla-3a-parte-como-instalar-linux-en-una-maquina-con-un-efi-de-mierda/
Ukukhuluma iqiniso, ngiyayiphika eyami indatshana …… ..umshini wami awukaze ube ne-uefi. Enganginakho kwaba ukwahlukanisa okubi. Ngangingazi nje ngaleso sikhathi.
Siyafana, ngoba futhi uma ngishicilela njengohlanya ngivele ngibone ukuthi ngisanda kwenza amaphutha.
Yebo, mathupha, endabeni yekhompyutha yedeskithophu angibanga nankinga ngoba ngilungiselele ikhompyutha ye-clone esilinganisweni sami futhi njengoba ngangifuna bese ngifaka i-Linux ebengiyifuna.
Manje uma kufanele ngithenge i-laptop, bengingeke ngazi ukuthi ngenzenjani, yize ngazi ukuthi lapha eSpain kukhona nezitolo ezibathengisa mahhala kuhlelo lokusebenza. Yize ngingazi ukuthi lezozitolo zingaba yini.
AKUKHO UEFIBoot = Bye Bye Mocosoft
Uyemukelwa i-GNU / Linux
Kuyiqiniso ukuthi iMocosoft ingundlovukayiphikiswa ne-SecureBoot shit yayo ekugcineni engavikeli lutho nhlobo
Cha bhuti bye bye bye Microsoft, banamandla amakhulu nemakethe, okungenani ngihlala e-US futhi izitolo ezinkulu ze-PC zibizwa ngeTiger Direct kanye neBest Buy futhi zonke sezivele zikuthengisela i-Windows 8 oyifakile kuqala ngabuza ochwepheshe bazo futhi isizathu ukuthi banenkontileka ne-microsost ukuthi bangathengisa kuphela i-PC ne-laptop ngohlelo lwabo uma bekwenza nenye i-OS abayifunayo. Ngicabanga ukuthi kunalokho iMicrososft lokhu abafuna ukukwenza kufana nokuba nokulawula futhi bafuna ukuthi i-linux ibakhokhele njengezinkampani ezifaka i-android kumafoni abo.
Yebo, vele ususe windows 8, bese ufaka i-linux noma uma ungiphuthumisa ku-osx XD, bese wenza kungasebenzi i-boot evikelekile, akukho okunye.
Yize ukuguqula i-PC yakho ibe yiHackintosh kufanele kubonakale uma ikhadi levidiyo lisekela i-256 MB okufanele okungenani isebenze okungenani ne-interface ye-Aqua ngendlela ehloniphekile, futhi muva nje, i-OSX86 efana ne-iAtkos ikhipha kuphela izinhlobo zayo zamabhodi womama 64 -bit Intel hhayi nge-AMD.
Noma kunjalo, ngincamela ukufaka i-OpenBSD nge-KDE esikhundleni sokuguqula i-PC yami ibe yiHackintosh.
Angiluleki noma ngubani ukuthi asebenzise i-osx enekhadi elinevidiyo engaphansi kwama-512 mb xddd, ingasetshenziswa kakhulu i-osx ne-amd ... ayisoze yafana.
Mayelana ne-osx, bengisho nje, ngoba inezinhlelo ezithile ezikumawindi, angisho lutho nge-openbsd, ngoba ngakho-ke, ayinakho okunye ngaphandle kwalokhu i-linux enakho.
Lapho ngivivinya iMacBook, ngamangazwa ubulula obubonakalayo nobusebenzayo be-Aqua interface ye-OSX, ngaphezu kwalokho iningi lezinhlelo ezisebenza ku-OSX zisebenza ngaphandle kwezinkinga (ngaphandle kwe-Adobe Flash Player, ebonakala inezinkinga nge isikhombimsebenzisi lapho kwenziwa). Kodwa-ke, i-GUI yayo eyi-Aqua inzima ngendlela esabekayo (futhi labo abasebenzisa iWindows Vista bebekhononda ngesilinganiso esingu-128 MB sevidiyo esetshenziswe yi-Aero kungafaki ukugcwala komhlaba okunezela enye i-128 MB yokucubungula futhi kuze kube manje kungafinyeleli kulokho kuhlangana kudla) ngakho-ke, ngingacabanga ngokuthenga iMacBook eshibhile futhi ngingahlukumezi iPC yami ngokufuna ukuyiguqula ibe yiHackintosh.
Ngokuqondene ne-OpenBSD, ngisaqala nje. Kumele ngivume ukuthi isifaki se-OpenBSD esisesimo sefomu silula futhi siyasebenziseka, futhi futhi singafanelana kahle ne-Arch (yize ngabe lesi sifaki singesokuzithandela, kuzokwanela ukuthayipha kuphela i-terminal "archsetup "futhi ngaleyo ndlela isifaki sokuqagela Kusisiza ukufaka uhlelo ngaleli fomu ngegama lesicelo ngasinye nenqubo ezokwenziwa).
I-PS: Yize i-OSX ithathwa njenge-BSD distro ebuthakathaka kakhulu laphaya, kunenqwaba yama-fanboys aqhubeka nokusebenzisa lolo hlelo. Angimzondi noma angibambele igqubu, angithathi hlangothi futhi ngigwema ukuba ngumuntu othanda izinto ngokweqile.
PD2: Kepha yi-Unix, yi-Unix. Noma kunjalo, ukuphatha izinhlelo ku-OSX ngaphandle kwekhonsoli kubonakala kimi kuyinto emnandi kakhulu ebengingayithola.
Ngisanda kuzama ukususa i-uefi kwi-pc yomngani wami efakwe ngamawindows 8 ngayo, kepha angizange ngiyicuphule nakho konke futhi angazi ukuthi kwenzekeni, futhi ngaze ngakudlulisa ukuze i-boot order ibe ngeyokuqala i-cd-rom hhayi le ene-hard drive, ngiyakugcona ukwenza lokho, ake sibone ukuthi kwenzekani uma ngizama futhi, ngiyabonga noma kunjalo!
Kuya ngalokho okufunayo, ungafinyelela kulesi sixhumanisi futhi ubone izinketho onazo (lokhu kungubuntu) -> https://help.ubuntu.com/community/UEFI Lapha kuphikiswana kahle futhi kubhalwe phansi konke okuphathelene ne-uefi ne-boot boot, ungayifaka ngemodi ye-uefi noma cha, konke kuya ngomenzi wayo.
Bekufanele ngiyekise ukusebenza kwe- «Legacy Mode» (angazi ukuthi izokwenzenjani), ngoba nami bengingasasebenzi i-Secure Boot futhi ibingangisebenzeli. Ngakho-ke uma ubona inketho yemodi yefa laphaya, khumbula ukuyikhubaza futhi.
UWillians vivanco kusho
Kufanele bajabule ngokuthola ithuba ezingeni le-BIOS ukukhubaza i-UEFI e-fucking ... Lapho kuqala ubuchwepheshe obudala be-yore, umqondo bekungukuthi bekufanele bakugwinye konke bese bekuncela.
Incwajana yami entsha yeza neWindows 8 nokufaka iDebian, bekufanele ngenze esinye isinyathelo sokudlula kwi-BIOS nokukhubaza i-UEFI.
Phendula uWillians Vivanco
Iqiniso ukuthi lolu hlelo aluqedi ukungisebenzela (yize okuthunyelwe kuthakazelelwa !!)
Uma ngikhubaza i-Secure Boot ne-UEFI inikwe amandla, ngiyakwazi ukuvula i-USB, kepha i-laptop ithi kimi "Uhlelo lokusebenza alutholakalanga". Ngibe sengizama ukufaka i-Debian ekwahlukanisweni kweModi yeLifa. Umphumela uba nakho kokubili windows ne-Debian ngasikhathi sinye, kepha kufanele ngishintshe i-config. I-BIOS njalo lapho ufuna ukushintsha i-OS.
Lokho wukuthi, kufanele ngiye ku-BIOS ngiyibeke kumodi "yefa" uma ngifuna ukungena ku-Debian, noma ku-UEFI uma ngifuna iWindows esikhundleni ...
Wow, ukuthengiselana ^^ »
Ungafaka i-linux nge-uefi noma ngaphandle kwayo, uma kwenzeka uyifuna nge-uefi wenza kungasebenzi i-boot esheshayo kuphela bese ushiya i-boot evikelekile isebenza futhi udale ukwahlukanisa okujwayelekile kwe-linux bese uqala i-usb noma i-CD / DVD yakho njengoba ufuna, lapho kuphuma Inketho yokufaka noma yokuhlola i-linux kuzinketho zebhuthi owengeza "i-nomodeet", futhi isikhathi esithile lapho ufake i-linux yakho, i-grub izobona windows 8 kepha ngeke ikuvumele uqalise ukuze uzobe ubalekela i-console yokulungisa i-boot kusuka ku-linux, ngizolungisa okuthunyelwe okuningiliziwe ngalokhu, imikhonzo
Ngiyabonga impendulo, ngizobhekisisa lokho okuthunyelwe! (Noma ngingenayo into efana naleyo ye-fastboot)
r @ y kusho
Njengoba bengibona kokunye okuthunyelwe ngodaba olubili lwe-boot, beluleka ukufaka uhlelo lwama-64-bit olusekela uefi (debian, ubuntu, opensuse ...) nokufaka i-boot kuhlukaniso oluhlukile bese kusuka ku- "wintendo" usebenzisa i- Ithuluzi le-EasyBCD lokulenza libe ukungena kweLinux. Ngakho konke lokhu okusolakala ukuthi kuvela kwimenyu ye-Windos boot singaqala noma yiziphi izinhlelo, angikaze ngiyibheke le ndlela kepha maduzane nje.
Phendula ar @ y
Ngabe iMozilla Firefox yephula ubumfihlo bethu? Angicabangi kanjalo